DEG DEG: Meydadka 9 dhallinyaro ah oo la soo dhigay duleedka Balcad | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DEG DEG: Meydadka 9 dhallinyaro ah oo la soo dhigay duleedka Balcad
DEG DEG: Meydadka 9 dhallinyaro ah oo la soo dhigay duleedka Balcad
Balcad (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha dhexe ayaa sheegaya in duleedka Magaalada Balcad la soo dhigay meydadka Sagaal dhalinyaro ahaa oo la dilay.
Dhalinyaradaan oo la dilay ayaa ahaa Shaqaalaha Xarun MCH oo ku taalla deegaanka Gololeey, isla markaana shalay rag hubeysan ay deegaankaas ka afduubteen, isla markaana maanta meydkooda laamiga deegaanka Gololeey la soo dhigay.
Laba ka mid dhalinyarada la dilay ayaa si wayn waxaa looga yaqaanaa Magaalada Balcad ee Gobolka Shabellaha dhexe, balse hawlo shaqo ayeey u tageen Gololeey.
Dadka deegaanka waxa ay sheegeen shalay in dhalinyaradan la afduubtay, maantana maydkooda sidaasi lagu soo dhigay deegaanka Gololey.
Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmiga ah ee la dilay dhalinyaradan, balse dadka deegaanka ayaa sheegaya dilka wiilashan dhalinyarada ah inuu salka ku haayo arrimo aano qabiil.
Maydadka dhalinyaradan ayaa waxaa loo soo qaaday Magaalada Muqdisho, waxaana la geynayaa Xarunta C.I.D ee Booliska Soomaaliya, si baaritaano loogu sameeyo.